Coutinho oo laga yaabo in uu ka tago Anfield Stadium - BBC News Somali
Coutinho oo laga yaabo in uu ka tago Anfield Stadium
Lahaanshaha sawirka RFX
Image caption Philippe Coutinho oo dhulka fadhiya
Kooxda Barcelona ee reer Spain ayaa lagu wadaa inay u gudbiso kooxda Liverpool dalabka weeraryahanka khadka dhexe ee reer Brazil Philippe Coutinho.
Barcelona ayaa lagu wadaa inay miiska u saarto Liverpool aduun lacageed oo gaaraya 140 milyan oo doolar, waxayna tani ka dambeysay ka dib markii Barcelona ay ka iibisay ciyaaryahan Neymar, kooxda PSG, balse tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa goor sii horeysay wuxuu muujiyey sida uu uga biyo diidsan yahay in uu iibiyo Coutinho, hase yeeshee kooxda Barcelona ayaa ku kalsoon inay soo afmeerto heshiiskan.
Wararka kale ee ciyaaraha
Ciyaaryahanka fallaagada ka noqday in uu heshiis cusub u saxiixo kooxda Arsenal, Alexis Sanchez ayaa hadda u diyaar ah in uu aqbalo diidmada kooxdiisu u diiday in uu ka tago sanadkan, isla markaana uu diyaar u yahay in uu dhameysto heshiiska 12-ka bilood uga dhiman tahay ee uu ku joogo garoonka Emirates si xagaaga dambe iskiis meeshii uu doono u tago si lacag la'aan ah.
Kooxda Arsenal ayaa wadahadalkii ugu dambeeyey waxay kula jirtaa kooda Mocaco ee Faransiiska si ay ula soo wareegto xidiga khadka dhexe Thomas Lemar.
Kooxaha Real Madrid iyo Manchester United ayaa isku diyaarinaya ciyaarta adag ee koobka Super Cup-ka ee maalinimada beri ah ka dhici doonta magaalada Skopje ee dalka Macedonia. Xiddiga reer Portugal ee ay ku dhaarato Real ayaa maanta la safray kooxdiisa isagoo lagu wado in uu ka horyimaado kooxdiisii hore ee shayaadiinta cas cas.